Ahoana ny fomba hampiasana ny "Mode Recovery" amin'ny iPad misy Face ID | Vaovao IPhone
Mety mila antony iray ianao mampihetsika ny fomba fanarenana (Mode Recovery) amin'ny iPad vaovao misy Face ID anao ary tsy fantatrao ny fomba hanaovana azy. Izany no antony hanehoanay anio anao ireo dingana tsotra ilaina amin'izany.
Ity fiasa ity dia ampiasaina hamerenana amin'ny laoniny ny fitaovantsika amin'ny laoniny noho ny olana amin'ny écran voasakana miaraka amin'ny sary famantarana Apple izay tsy mandroso, ny tsy fahombiazana rehetra inoantsika dia mitaky famerenana amin'ny laoniny na satria fotsiny hoe te hametraka iPadOS amin'ny rangotra isika. Hatramin'ny nahatongavan'ny Face ID ny fomba hanaovana azy dia niova kely Mikasika ireo fitaovana manana Touch ID, ka mety tsy fantatrao ny fomba hanaovana azy amin'ny iPad miaraka amin'ity rafitra mamoha ity.
Ataovy ao anaty maody fanarenana ny iPad-nao miaraka amin'ny ID ID
Ny maodely IPad misy an'ity karazana sensor ho an'ny tarehy ity dia mitaky ireto dingana manaraka ireto mba hampavitrika ity fomba ity. Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia tazomy ny bokotra miakatra na midina ary ny bokotra ambony mandra-pisehoan'ny safidy hamono ny iPad. Vantany vao miseho izy dia vonointsika izy io. Ankehitriny isika dia tsy maintsy mampifandray ny iPad amin'ny Mac na PC antsika (miaraka amin'ny iTunes) amin'ny alàlan'ny tariby ary tsindrio ny bokotra herinaratra mandra-pahatongan'ny tariby miaraka amin'ny MacBook eo amin'ny efijery.
Raha vantany vao eto isika dia efa manana ny iPad amin'ny maody fanarenana ary afaka mamerina azy io amin'ny Mac mihitsy ao amin'ny Finder (miaraka amin'ny macOS Catalina) na avy amin'ny iTunes raha toa ka manana Windows. Tsotra ny fizotrany ary mazava ho azy fa tsy maintsy fantarintsika izay tiana hatao mba hampandeha ity fomba fanarenana ity amin'ny iPad, ity fampiasa ity dia afaka mamafa ny angona avy amin'ny iPad raha tsy fantatsika izay ataontsika. mitazona backup amin'ny zava-drehetra alohan'ny hanatanterahana an'io dingana io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Ahoana ny fomba hampiasana ny "Mode Recovery" amin'ny iPad misy Face ID
Apple dia afaka nahatratra AirPod 100 tapitrisa tamin'ny 2020